हजारौं फिटको उचाइमा हवाईजहाजको पखेटामा हिंडिरहेका यी युवक को हुन् ? रातारात भिडियो बन्यो भाइरल ? – Annapurna Post News
हजारौं फिटको उचाइमा हवाईजहाजको पखेटामा हिंडिरहेका यी युवक को हुन् ? रातारात भिडियो बन्यो भाइरल ?
June 2, 2022 sujaLeaveaComment on हजारौं फिटको उचाइमा हवाईजहाजको पखेटामा हिंडिरहेका यी युवक को हुन् ? रातारात भिडियो बन्यो भाइरल ?
सामाजिक सञ्जालमा यस्तो भिडियो सार्वजनिक भएको छ, जसलाई देखेर मानिसहरु छक्क परेका छन् ।
हजारौं फिटको उचाइमा पनि मानिसले हवाईजहाजको पखेटामा कसरी आरामसँग हिँड्न सक्छ भन्ने कुरा पहिलो नजरमा मानिसहरूले बुझेनन्। त्यसोभए हामी तपाईंलाई यो भिडियोको वास्तविकता बताउँछौं वास्तवमा, यो भिडियो इन्डोनेसियाको राजधानी बालीको न्यांग-न्यांग बीचको हो।
जहाँ एक सेवानिवृत्त बोइङ विमान समुन्द्री पहाडमा राखिएको छ। विमान जमिनबाट हजारौं फिट उचाइमा छ। यो विमानको पखेटामा एकजना मानिस आरामसँग हिँडिरहेको देखिन्छ । जसको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यो भिडियो हालै इन्स्टाग्राम पेज अर्थपिक्स मा शेयर गरिएको छ। जहाँ यसलाई १० लाखभन्दा बढीले हेरेका छन् ।
यसमा हजारौंले कमेन्ट गरेका छन् । भिडियो खिच्ने फोटोग्राफरसँग हवाईजहाजको पखेटामा हिंड्ने एक व्यक्तिको साहसको प्रयोगकर्ताहरूले प्रशंसा गरेका छन् । तर, कतिपयले यसलाई खतरनाक र अव्यावहारिक स्टन्ट भनेका छन् ।
भिडियोमा देख्न सकिन्छ कि हजारौं फिटको उचाइमा विमानको पखेटामा एक व्यक्ति कसरी आरामसँग हिँडिरहेका छन्। विमानको पखेटा पहाडको तलतिर हावामा छ। यदि व्यक्तिको खुट्टा चिप्लिएको भए उनी सीधै गहिरो खाडलमा झर्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
इन्स्टाग्राममा शेयर गरिएको भिडियोका अनुसार यसलाई खिच्ने फोटोग्राफरको नाम कोमिङ दर्मावान हो । भिडियो हेरेपछि मानिसहरुले निकै राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले यसलाई अचम्मको स्टन्ट भनेका छन् भने कसैले व्यक्तिको साहसको प्रशंसा गरेका छन् । कतिपयले उनको सुरक्षाप्रति चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
फोहोरी राजनीति गर्दिन भन्दै बालेनको बोलीमा बोली मिलाउने उपमेयर सुनिताको बोली पदभार ग्रहण गरेको दुई दिन नबित्दै फेरिएको हो ? (भिडियोसहित)
संकटाको दर्शन गरेर घरबाट उडानमा निस्कने क्याप्टेन प्रभाकरको अक्करे भीरमा टर्न नसकेको त्यो संकट
हाम्रो आँखा कति मेगापिक्सेलको हुन्छ ? आँखासम्बन्धी रोचक तथ्यहरु जान्नुहोस्